आमाको छेउमा सुतिरहेको बेला २३ दिनकी बालिकाको मृ\_त्यु , यस्तो गल्ती तपाईं नगर्नु होला ! – Dailny NpNews
आमाको छेउमा सुतिरहेको बेला २३ दिनकी बालिकाको मृ\_त्यु , यस्तो गल्ती तपाईं नगर्नु होला !
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २८, २०७८ समय: १८:५२:०९
बच्चाहरु धेरै ना’जुक छन्। सानो ग’ल्तीले पनि हामीलाई महँगो पर्न सक्छ। विशेष गरी जब बच्चा नवजात छ, यो हरेक क्षण हेरचाह गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यद्यपि हरेक आमाले आफ्नो नवजात शिशुको धेरै ख्याल राख्छिन् तर पनि अ’ज्ञानता वा ला’प’र’वा’हीका कारण आमाबाट केही यस्ता ग’ल्ती हुन्छन् जुन बच्चाको लागि न’राम्रो सा’बित हुन्छ । अब बंगालको कोलकाता सहरको यो हृ’द’य’वि’दा’र’क घ’टनालाई लिनुहोस्।
वास्तवमा, कोलकातामा, एउटी आमा आफ्नो 23 दिनकी छोरीसँगै सुतेकी थिइन्। तर, केही यस्तो भयो कि बिहान हुन नपाउँदै नि’र्दो’षको सा स रो’कियो । बेहोस अवस्थामा छोरीलाई देखेर आमाको क’लेजो बा’हिर आयो
राति नै छोरी लिएर अस्पताल पुगेकी थिइन् तर अफसोस ढिला भइसकेको थियो । उनको नवजात छोरीलाई चिकित्सकले मृ त घो’षणा गरेका थिए । छोरीको मृ; त्युको का’रण खुल्दा त्यसमा आमाको ग’ल्ती भेटियो । अहिले आफ्नो यो सानो ग’ल्तीले दुखी आमा रु’दै छिन् ।
वास्तवमा यो मार्मिक मामला कोलकाताको प्रगति पुलिस स्टेशन क्षेत्रको हो। यहाँ दिवाकर मण्डल निवासी अपर्णा दास नामकी महिला २३ दिनअघि आमा बनिन् । घरमा छोरीको चि’त्कार सुनेर सबै खुसी भए ।
त्यसपछि शनिबार राति अपर्णा आफ्नी छोरीसँग ओछ्यानमा सुतेकी थिइन् । छोरी निद्रामा ओछ्यानबाट तल ख’स्छ कि भन्ने ड’रले उसले छोरीको छेउमा एउटा माथि अर्को धेरै तकिया राख्यो। तर आमलाई आफ्नो यो चा’लाकी धेरै भा’री भयो ।
राति छोरीको मुख सि’रानीमुनि द’बि’यो । उनले राम्रोसँग सास फेर्न सकिनन् । जसका कारण उनको निद्रामै मृ; त्यु भएको हो । राति करिब तीन बजे आमा ब्यूँझनुभयो ।
उनले छोरीलाई धेरै हल्लाए तर उनको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन । यसपछि ड’राएकी आमाले राति नै परिवारका सदस्यलाई जगाएकी थिइन् । सबैले बालिकालाई अस्पताल लगे । यहाँ डाक्टरले बच्चा अब यो सं’सारमा र’हेन बताए ।
बालिकाको मृ; त्युको खबरले सिंगो परिवार शो कमा डु’बेको छ । घरमा आएकी लक्ष्मी एक महिनाभित्रै फर्किइन् भन्ने कुरा पत्याउँदैनन् । रुँ दै आमाको हा’लत निकै ख’राब छ ।
आफ्नी छोरीको मृ; त्युको लागि उनी बारम्बार आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने गर्छिन् । आफ्नी छोरीको सुरक्षाको लागि राखेको तकियाले आफ्नी प्रेयसीको ज्या न लि’नेछ भनेर उनलाई कमै थाहा थियो।
तपाईंले पनि यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । बच्चा राती सुत्दा उसको सिरानी वा स्त नले नि’सा’सि’एर बच्चाको सा’स नरो’कियोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्।
यसअघि बच्चालाई दूध खुवाउँदा आमाको आँखा लाग्ने र आमाको स्त नमुनि निसासिएर बच्चाको मृ; त्यु भएको घटना यसअघि पनि सार्वजनिक भएको थियो ।